Deus Ex: Bani'aadmigu waa qaybsan yahay hadda waxaa loo heli karaa macOS | waxaan ka imid mac
Sidii maalmo ka hor la shaaciyey, ciyaarta cusub ee Feral, Deus Ex: Mankind Divided, ayaa hadda loo heli karaa nidaamka deegaanka ee 'Apple macOS ecosystem', sidaasna lagu ballaarinayo tirada cayaaraha hadda lagu bixiyo barnaamijka Apple. Munaasabaddan, iyo sidii caadiga ahaydba, ciyaarta lama heli karo iyada oo loo marayo Mac App Store, laakiin waxaan ka heli karnaa marinka Steam ama iyada oo loo marayo Dukaanka Rasmiga ah ee Feral. Ciyaarta aasaasiga ah waxaa lagu qiimeeyaa 49,99 euro, illaa iyo hadda waxay heshay tiro aad u badan oo dib u eegis togan oo celcelis ahaan 9 ka mid ah warbaahinta badankeed.
Haddii ciyaaruhu aysan ahayn waxaaga, waxaa laga yaabaa inaadan ka ogeyn kulankaan soo jiitay dareenka aad u badan tan iyo markii la shaaciyay barnaamijka Apple desktop-ka. In Deus Ex: Makind loo qaybiyay waxaan isku dhejinay kabaha Adam Jensen, oo ah wakiil loo baahan yahay dhammaystir howlo kala duwan si aad uga badbaadiso naftaada shirqoolka kugu xeeran. Dhamaan ficilku wuxuu ka dhacayaa jawi loo dejiyay 2029, halkaas oo bini'aadamku ku helo kor u qaadis robot ah jidhkooda, waxaana loo weeciyay heerka ajaanibta, iyagoo ku nool gebi ahaanba liidata oo gebi ahaanba ka go'doonsan bulshada.
1 Deus Ex: Samee Shuruudaha Loo Qaybiyey
2 Deus Ex Moodooyinka Mac-wadajirka ah: Ka dhig Qaybsan
Deus Ex: Samee Shuruudaha Loo Qaybiyey
Nooca nidaamka qalliinka: macOS 10.13.1
5 GHz Intel core i3.0 processor
Kaarka sawirada: 2 GB AMD R9 M290 ama ka fiican
Meel bannaan oo lagu kaydiyo: 67 GB
Deus Ex Moodooyinka Mac-wadajirka ah: Ka dhig Qaybsan
Dhamaan barnaamijyada 'MacBook' laga soo bilaabo 2016 illaa iyo hadda.
Dhamaan 4k iMac 2017
Dhamaan iMac 5k 2014 wixii ka dambeeya
Dhamaan Mac Pro ilaa 2013.
Haddii aynaan caddeyn qaabkayaga Mac, waa inaan tagnaa liiska ugu sarreeya ee Mac-da, guji tufaaxa iyo Xullo Mac-kan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Ciyaaraha » Deus Ex: Bini-aadamka Waa loo Qaybiyay hadda oo loo heli karo macOS